Nanatevin-daharana ny diabe goavana tany Hong Kong ireo bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2018 13:19 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Desambra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Vahoaka maherin'ny 200.000 no voalaza fa nanatevin-daharana ny diabe tamin'ny 4 Desambra 2005 tao Hong Kong izay nandrisika ny governemanta mba hanangana ny tondrozotra mazava kokoa hiantohana ny fahafahana mifidy ho an'ny olom-pirenena tao an-toerana tamin'ny fifidianana ny Lehiben'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna ao amin'ny fari-pitantanana. Nanomboka tao amin'ny Kianja Victoria ny diabe , ary nifarana tany amin'ny biraon'ny governemanta izay roa ora miala eo. Nanatrika ny diabe ny mpiasam-panjakana ambony indrindra faharoa ao Hong Kong, ny Sekretera Jeneraly teo aloha Anson Chan, ary nahasarika betsaka ny sain'ny olona manerantany. Nantsoina hoe feon'ny fieritreretan'i Hong Kong i Ramatoa Chan satria nisisika tamin'ny tombontsoan'i Hong Kong izy. Voatery nametra-pialana tao amin'ny governemantan'i Beijing izy tamin'ny taona 2001.
Sarin'i Anson Chan nalain'i Charles FengNamaly ny diabe tamim-pahavitrihana tokoa tamin'ny fomba maro samihafa ny andro manaraka ireo bilaogera ao Hong Kong. Niresaka betsaka momba ity diabe tamin'ity 4 Desambra ity ny tranonkalam-bilaogy Shinoa malaza antsoina hoe Independent Media izay notantanan'ny mpitsikera ara-kolotsaina sasany tao Hong Kong. Nilaza ny bilaogera sasany tetsy sy teroa ( zokiolona, ​​diabe lehibe ) fa nampihetsi-po azy ireo ny zokiolona maro be izay nanao ny diabe nandritra ny adiny roa, ary nanontany tena hoe nahoana no tsy nandray anjara tamin'ny diabe ny tanora tao HK (amin'ny teny ZH, bilaogy iray hafa mitovy amin'izany). Nisy ihany koa ny bilaogera sasany tao amin'ny Independent Media no tezitra mafy tamin'ny manampahefana iray tao Beijing teo aloha sady profesora tao Shina nilaza fa tsy miankina amin'ny habetsahan'ny olona miteny ny marina, ary tsy izany mihitsy ny marina na dia misy olona aman'hetsiny aza midina an-dalambe hanao fihetsiketsehana (amin'ny teny ZH).
Bilaogera iray antsoina hoe Tricky guy's park no talanjona tamin'ny fihetsika matotra sy milamina nandritra ny diabe. Nilaza ny sampan-draharahan'ny polisy fa 63.000 ny isan'ny mpanao fihetsiketsehana, saingy nilaza ny mpikarakara ny diabe fa 250.000 izany. Maro ireo bilaogera no tsy nanaiky ny tarehimarika izay notaterin'ny governemanta. Nilaza ny bilaogera malaza iray hafa, Glutter fa mikasa ny hanodikodina fotsiny ny fampitam-baovao ny governemanta. Nilaza i Glutter tao tamin'ny tatitra momba ny diabe fa nanaitra azy ny isan'ny ankizy tao. Nandefa sary maro tao amin'ny flickr mifandray amin'ny diabe i Glutter. Tsy niresaka momba ny diabe ny bilaogera Shinoa mavitrika iray, t-salon, angamba noho ny olana ara-teknika sasany tamin'ny bilaoginy. Namoaka pikantsary tao amin'ny flickr kosa anefa izy tetsy andanin'izany.
Nanangona loharanom-baovao maherin'ny roapolo nitatitra ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny fomba akademika kokoa mba hamelabelarana tsy misy fitsaharana ny hoe firy ny isan'ny olona eto an-tany tamin'izay fotoana izay ilay bilaogera fanta-daza, EastSouthWestNorth. Bilaogera iray antsoina hoe Letters from China nitatitra ny adihevitra hafa momba ny diabe avy amin'ny bilaogy sasany . Mitovitovy amin'ny lahatsora-baovao ny lahatsoratra.
Ny mahaliana, nanatevin-daharana ny diabe noho ny antony samihafa ireo bilaogera rehetra voalaza etsy ambony ireo . Nanohana ny fangatahana demaokratika ny sasany tamin'izy ireo, ary ny mba hijery fotsiny ihany ny hafa. Toa hita fa nampiseho ny hery demaokratika eny ifotony ireo bilaogera